Ibhasi Ebomvu - I-Airbnb
Indlu yonke sinombuki zindwendwe onguArielle
Le bhasi ikhethekileyo yale mihla inento yonke oyifunayo ukuze uthi zava xa uneshawa eshushu, ikhitshi negumbi lokuhlambela kunye nesitovu esisembizeni. Inegadi yayo yabucala kunye nendawo yokupaka. Yeyabucala, ifudumele kwaye ipholile, ingqongwe yindalo. Iphakathi komgama wokuba ungahamba ngeenyawo ukusuka kwikhefi encinci yoMlambo kunye negalari yezobugcisa, kwaye kufutshane nomzila wololiwe (ukuhamba ngebhayisekile), ukuhamba emahlathini, ithaveni yeHilltop yokutya kunye nomculo, iilwandle ezintle kunye neAkaroa. Ibhasi ibalungele abantu abathandanayo, kunye nabantu abathanda izinto ezingaqhelekanga.
Ukuhlala kwi-Red Bus yethu yinto ekhethekileyo. Kuyavuyisa kwaye kungokwale mihla kwaye kukwenza uzive uthe zava kakhulu. Kufuneka ube nayo yonke into oyidingayo ukuze uhlale kamnandi ixesha elifutshane okanye elide apha. Ikhitshi neshawa epheleleyo zingaphakathi. Kukho isitovu esinokusetyenziswa ngokuhlwa okupholileyo. Zonke izinto zebhedi nezinto zebhedi ziyafumaneka. Indlu yangasese nendawo yokuhlamba iimpahla ikwigumbi elisecaleni kwebhasi.
I-Little River yilali entle eneevenkile zokutyela eziyi-2, igalari yezobugcisa kunye nevenkile yezinto zobugcisa. Kukwakho nesikhululo sePetroli, ivenkile, ilayibrari kunye neofisi yeposi. Umlambo ungena edolophini ibe kumnandi ukuhamba-hamba. Kukho imithi emininzi. Abantu banobubele kakhulu apha kwaye isantya siyacotha ngoko yindawo onokuphumla kuyo. Asikho kude ne-Hilltop tavern, indawo yomculo entle. I-Little River yindawo entle apho unokubuka khona uhambo oluhle kunye nezinto onokuzenza kwiBanks Peninsula kwaye yimizuzu eyi-30 ukusuka eAkaroa, idolophu entle engaselwandle eneevenkile ezahlukahlukeneyo, iivenkile zokutyela neevenkile zokutyela. Inikezela ngokuqubha nokubuka iindawo kunye neeDolphins kunye nezinye izinto ezenziwayo zasendle.
Umbuki zindwendwe ngu- Arielle
Ndiza kuba kufutshane kwaye ndifumaneke ukuba unemibuzo okanye ufuna nayiphi na inkcazelo malunga nantoni na. Mna, umyeni wam kunye namakhwenkwe ethu ayi-2 sihlala kwindlu esecaleni komnyango, ngoko andidli ngokuya kude kakhulu.